ကာဒစ်ဖ်ဟာ လီဗာပူးလ်အသင်းအတွက် ပြိုင်ဘက်ကောင်း မဟုတ်ပါဘူး
အိမ်ကွင်းမှာ ကာဒစ်ဖ်ကို အမှားအယွင်းမရှိ အနိုင်ယူသွားမယ့် လီဗာပူးလ်
27 Oct 2018 . 2:47 PM
ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ် (၁၀)စနေနေ့ပွဲတွေမှာတော့ ပွဲကောင်းတွေ သိပ်မရှိဘဲ အသင်းကြီးဆိုလို့ လီဗာပူးလ်တစ်သင်းသာ ကာဒစ်ဖ်နဲ့ ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အမှတ်ပေးဇယား ထိပ်ဆုံးက မန်စီးတီးနဲ့ (၂၃)မှတ်တူ ဂိုးကွာခြားချက်အရ ဒုတိယနေရာမှာ ရပ်တည်နေတဲ့ လီဗာပူးလ်အသင်း ကာဒစ်ဖ်ကို အသာရနိုင်ဖို့ ကြိုးစားရမှာပါ . .
ဘရိုက်တန် – ၀ုလ်ဗ် (စနေ ည ၈း၃၀ နာရီ)
ဘရိုက်တန်အသင်း ရုန်းကန်ခဲ့ရပြီးမှ နောက်ဆုံး(၂)ပွဲဆက် အနိုင်နဲ့ ရလဒ်ပြန်တက်လာတယ်။ ၀ုလ်ဗ်ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က ၀က်ဖို့ဒ်ကို အိမ်ကွင်းမှာ မထင်မှတ်ဘဲ ရှုံးခဲ့ပေမယ့် ကျန်တဲ့ပွဲတွေမှာ ခြေစွမ်း တည်ငြိမ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခြေစွမ်းရော၊ ရလဒ်ပါ တက်ရိပ်ပြလာတဲ့ ဘရိုက်တန်ကိုပဲ ရွေးချယ်ချင်ပြီး အနည်းဆုံး သရေတစ်မှတ် ရယူသွားပါလိမ့်မယ်။
ဖူလ်ဟမ် – ဘုန်းမောက် (စနေ ည ၈း၃၀ နာရီ)
ကစားသမားကောင်းတွေ ရှိပေမယ့် ဖူလ်ဟမ်ရဲ့ ရလဒ်တွေ တော်တော်လေးဆိုးရွားနေတယ်။ နောက်ဆုံး (၅)ပွဲမှာ (၄)ပွဲရှုံးခဲ့ပြီး တစ်မှတ်သာ ရခဲ့တဲ့ဖူလ်ဟမ်အနေနဲ့ ခြေတက်နေတဲ့ ဘုန်းမောက်ကို အသာရနိုင်ပ့ါမလားဆိုတာ စဉ်းစားစရာပဲ။ အဝေးကွင်းဖြစ်ပေမယ့် ဘုန်းမောက် မရှုံးနိုင်ပါဘူး။
လီဗာပူးလ် – ကာဒစ်ဖ် (စနေ ည ၈း၃၀ နာရီ)
ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကမှ ဖူလ်ဟမ်ကို အနိုင်ယူပြီး ဒီရာသီ ပထမဆုံးနိုင်ပွဲ ရယူခဲ့တဲ့ ကာဒစ်ဖ်ဟာ လီဗာပူးလ်အသင်းအတွက် ပြိုင်ဘက်ကောင်း မဟုတ်ပါဘူး။ အခုနောက်ပိုင်း လီဗာပူးလ်အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်ကစားပုံ နည်းနည်း အားလျော့လာပေမယ့် ကာဒစ်ဖ်ကို အနိုင်ယူဖို့အတွက်တော့ လုံလောက်ပါတယ်။ လီဗာပူးလ်အသင်း အမှတ်ပြည့်ရမှာဖြစ်ပြီး ဂိုးပြတ်ဖို့တော့ မလွယ်လောက်ဘူး။
ဆောက်သမ်တန် – နယူးကာဆယ် (စနေ ည ၈း၃၀ နာရီ)
နှစ်သင်းစလုံးက ရလဒ်တွေ ဆိုးရွားနေပြီး ဆောက်သမ်တန်က အဆင့်(၁၆)၊ နယူးကာဆယ်က အဆင့်(၂၀)နေရာတွေမှာ ရပ်တည်နေတယ်။ စိတ်ဝင်စရာ မကောင်းတဲ့နှစ်သင်းဆုံတွေ့မှုမှာ နယူးကာဆယ်ကို ရွေးချယ်ချင်ပြီး သရေတစ်မှတ်တော့ ယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
၀က်ဖို့ဒ် – ဟတ်ဒါဖီးလ် (စနေ ည ၈း၃၀ နာရီ)
ရာသီအစတုန်းက ရလဒ်တွေ တောက်လျှောက်ကောင်းခဲ့တဲ့ ၀က်ဖို့ဒ် အခုတော့ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပြီး နိုင်တစ်ခါ၊ ရှုံးတစ်လှည့်နဲ့ ရုန်းကန်နေရတယ်။ သူတို့နဲ့ ရင်ဆိုင်ရမယ့် ဟတ်ဒါဖီးလ်ကလည်း ဘာမှမထူးပါဘူး။ အခုထိ နိုင်ပွဲမရသေးဘဲ တန်းဆင်းဇုန်ထဲမှာ ရပ်တည်နေရတယ်။ အိမ်ကွင်းခြေမာတဲ့ ၀က်ဖို့ဒ်ကို ကြိုက်မိတယ်။
လက်စတာ – ၀က်စ်ဟမ်း (စနေ ည ၁၁း၀၀ နာရီ)
လက်စတာအသင်း (၂)ပွဲဆက်နိုင်ပြီးမှ နောက်ဆုံး(၂)ပွဲဆက် ပြန်ရှုံးခဲ့တယ်။ ၀က်စ်ဟမ်းအသင်းကလည်း ခြေပြန်တက်လာပြီးမှ နောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာ ပြန်ကျသွားပြန်တယ်။ သရေကျဖို့များပြီး အနိုင်ဆိုရင်တော့ အိမ်ရှင်လက်စတာပါပဲ။
အိမျကှငျးမှာ ကာဒဈဖျကို အမှားအယှငျးမရှိ အနိုငျယူသှားမယျ့ လီဗာပူးလျ
ပရီးမီးယားလိဂျပှဲစဉျ (၁၀)စနနေပှေဲ့တှမှောတော့ ပှဲကောငျးတှေ သိပျမရှိဘဲ အသငျးကွီးဆိုလို့ လီဗာပူးလျတဈသငျးသာ ကာဒဈဖျနဲ့ ကစားမှာဖွဈပါတယျ။ အမှတျပေးဇယား ထိပျဆုံးက မနျစီးတီးနဲ့ (၂၃)မှတျတူ ဂိုးကှာခွားခကျြအရ ဒုတိယနရောမှာ ရပျတညျနတေဲ့ လီဗာပူးလျအသငျး ကာဒဈဖျကို အသာရနိုငျဖို့ ကွိုးစားရမှာပါ . .
ဘရိုကျတနျ – ဝုလျဗျ (စနေ ည ၈း၃၀ နာရီ)
ဘရိုကျတနျအသငျး ရုနျးကနျခဲ့ရပွီးမှ နောကျဆုံး(၂)ပှဲဆကျ အနိုငျနဲ့ ရလဒျပွနျတကျလာတယျ။ ဝုလျဗျကတော့ ပွီးခဲ့တဲ့တဈပတျက ဝကျဖို့ဒျကို အိမျကှငျးမှာ မထငျမှတျဘဲ ရှုံးခဲ့ပမေယျ့ ကနျြတဲ့ပှဲတှမှော ခွစှေမျး တညျငွိမျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ခွစှေမျးရော၊ ရလဒျပါ တကျရိပျပွလာတဲ့ ဘရိုကျတနျကိုပဲ ရှေးခယျြခငျြပွီး အနညျးဆုံး သရတေဈမှတျ ရယူသှားပါလိမျ့မယျ။
ဖူလျဟမျ – ဘုနျးမောကျ (စနေ ည ၈း၃၀ နာရီ)
ကစားသမားကောငျးတှေ ရှိပမေယျ့ ဖူလျဟမျရဲ့ ရလဒျတှေ တျောတျောလေးဆိုးရှားနတေယျ။ နောကျဆုံး (၅)ပှဲမှာ (၄)ပှဲရှုံးခဲ့ပွီး တဈမှတျသာ ရခဲ့တဲ့ဖူလျဟမျအနနေဲ့ ခွတေကျနတေဲ့ ဘုနျးမောကျကို အသာရနိုငျပ့ါမလားဆိုတာ စဉျးစားစရာပဲ။ အဝေးကှငျးဖွဈပမေယျ့ ဘုနျးမောကျ မရှုံးနိုငျပါဘူး။
လီဗာပူးလျ – ကာဒဈဖျ (စနေ ည ၈း၃၀ နာရီ)
ပွီးခဲ့တဲ့တဈပတျကမှ ဖူလျဟမျကို အနိုငျယူပွီး ဒီရာသီ ပထမဆုံးနိုငျပှဲ ရယူခဲ့တဲ့ ကာဒဈဖျဟာ လီဗာပူးလျအသငျးအတှကျ ပွိုငျဘကျကောငျး မဟုတျပါဘူး။ အခုနောကျပိုငျး လီဗာပူးလျအသငျးရဲ့ တိုကျစဈကစားပုံ နညျးနညျး အားလြော့လာပမေယျ့ ကာဒဈဖျကို အနိုငျယူဖို့အတှကျတော့ လုံလောကျပါတယျ။ လီဗာပူးလျအသငျး အမှတျပွညျ့ရမှာဖွဈပွီး ဂိုးပွတျဖို့တော့ မလှယျလောကျဘူး။
ဆောကျသမျတနျ – နယူးကာဆယျ (စနေ ည ၈း၃၀ နာရီ)
နှဈသငျးစလုံးက ရလဒျတှေ ဆိုးရှားနပွေီး ဆောကျသမျတနျက အဆငျ့(၁၆)၊ နယူးကာဆယျက အဆငျ့(၂၀)နရောတှမှော ရပျတညျနတေယျ။ စိတျဝငျစရာ မကောငျးတဲ့နှဈသငျးဆုံတှမှေု့မှာ နယူးကာဆယျကို ရှေးခယျြခငျြပွီး သရတေဈမှတျတော့ ယူနိုငျပါလိမျ့မယျ။
ဝကျဖို့ဒျ – ဟတျဒါဖီးလျ (စနေ ည ၈း၃၀ နာရီ)
ရာသီအစတုနျးက ရလဒျတှေ တောကျလြှောကျကောငျးခဲ့တဲ့ ဝကျဖို့ဒျ အခုတော့ ပုံမှနျပွနျဖွဈသှားပွီး နိုငျတဈခါ၊ ရှုံးတဈလှညျ့နဲ့ ရုနျးကနျနရေတယျ။ သူတို့နဲ့ ရငျဆိုငျရမယျ့ ဟတျဒါဖီးလျကလညျး ဘာမှမထူးပါဘူး။ အခုထိ နိုငျပှဲမရသေးဘဲ တနျးဆငျးဇုနျထဲမှာ ရပျတညျနရေတယျ။ အိမျကှငျးခွမောတဲ့ ဝကျဖို့ဒျကို ကွိုကျမိတယျ။
လကျစတာ – ဝကျဈဟမျး (စနေ ည ၁၁း၀၀ နာရီ)
လကျစတာအသငျး (၂)ပှဲဆကျနိုငျပွီးမှ နောကျဆုံး(၂)ပှဲဆကျ ပွနျရှုံးခဲ့တယျ။ ဝကျဈဟမျးအသငျးကလညျး ခွပွေနျတကျလာပွီးမှ နောကျပိုငျးပှဲတှမှော ပွနျကသြှားပွနျတယျ။ သရကေဖြို့မြားပွီး အနိုငျဆိုရငျတော့ အိမျရှငျလကျစတာပါပဲ။
by Naing Linn .4mins ago